May 25, 2020 - UpdateNew
အမျိုးသမီးရာနဲ့ချီအဓမ္မကျင့်ခဲ့တဲ့ မုဒိမ်းသမား ရဲ့ဇာတ်သိမ်း
May 25, 2020 UpdateNew 0
အမျိုးသမီးရာနဲ့ချီအဓမ္မကျင့်ခဲ့တဲ့ မုဒိမ်းသမား ရဲ့ဇာတ်သိမ်း အမျိုးသမီးရာနဲ့ချီအဓမ္မကျင့်ခဲ့တဲ့ မုဒိမ်းသမား ရဲလက်က ထွက်ပြေးစဉ် ချောက်ထဲပြုတ်ကျ အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး(၇)ယောက်ကို အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တဲ့ မုဒိမ်းတရားခံ ဂရိတစ်ဦးဟာ အမြင့်ပေ(၁၀၀)လောက်ရှိတဲ့ ချောက်ကမ်းပါးကနေ ပြုတ်ကျခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့မှတ်တမ်းတွေအရတော့ အဲဒီတရားခံဟာ အမျိုးသမီရာနဲ့ချီကို အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သူပါ။ သူဟာ ဒီအမှုတွေအတွက် ထောင်နှစ်ရှည် ချမှတ်ခံခဲ့ရပေမယ့် […]
အကြင်လင်မယားဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းရင်း အကြင်လင်မယားဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းရင်း (၂) မျိုး (၁) ပုဗ္ဗသန္နဝါသ ရှေ့ဘဝ ၊ ဘဝ မှ လင်မယားဖြစ်ခဲ့ရဖူးသောကြောင့် လင်မယားဖြစ်ရ၏။ (၂) ယခုဘဝတွင် တစ်ဦး၏အကျိုးကို တစ်ဦးက စေတနာအပြည့်နှင့် သယ်ပိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးခြင်း ကြောင့် လင်မယားဖြစ်ရ၏။ အောက်ပါအချက်များနှင့် တူညီတဲ့ အကြင်လင်မယားဖြစ်ပါက […]
ကလေးတွေကို ရိုက်နှက်ပြီးတောင်းစားခိုင်းတဲ့ လူနှစ်ယောက်
ကလေးတွေကို ရိုက်နှက်ပြီးတောင်းစားခိုင်းတဲ့ လူနှစ်ယောက် ဒီနေ့မနက် ၇၈×၂၆လမ်းထောင့်မှာ တောင်းခိုင်းနေတယ်လို့ ပြည်သူတစ်ယောက်ကတင်ထားတာတွေ့တာနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်ညီ LynnKhine အဲဒီနေရာကိုသွားပြီးကြည့် သက်ဆိုင်ရာနဲ့ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးပြီး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် တရားလိုလပ်ပြီး အမှုဖွင့်လိုက်ပါပြီ… မိတဲ့နေရာကတော့ ဆေးရုံကြီးရှေ့မှာပါ.. ကလေးနှစ်ယောက်ကိုတော့ တိုင်းလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကိုပို့ပေးမှာပါ… ဝိုင်းဝန်းကူညီ ဖမ်းဆီးပေးကြတဲ့ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်ယု၊ ကဉ္စနမဟီရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်မြင့်ဦး […]
လူငယ်စုံတွဲ ဟိုတယ် အခန်းထဲက တစ်ပတ်လုံး အပြင်မထွက်လို့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ
လူငယ်စုံတွဲ ဟိုတယ် အခန်းထဲက တစ်ပတ်လုံး အပြင်မထွက်လို့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ အဆင့်မြင့် ဟိုတယ်တစ်လုံး မှာ စုံတွဲတစ်တွဲ အခန်းငှားတည်းခိုခဲ့ပြီး ၇ ရက် တစ်ပတ်လုံးလုံး အခန်းထဲက ထွက်လာတာမတွေ့ရတဲ့အတွက် ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများနဲ့ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကပါ မသင်္ကာဖြစ်လာပြီး အခန်းကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ၊အားလုံး အံ့အားသင့် ဒေါသထွက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင် […]
တစ်ပတ်စာခုနှစ်ရက်သားသမီးကံကြမ္မာဟောကိန်း (25-5-2020 to 31-5-2020)-
တစ်ပတ်စာခုနှစ်ရက်သားသမီးကံကြမ္မာဟောကိန်း (25-5-2020 to 31-5-2020) တနင်္ဂနွေသားသမီး ငယ်ရွယ်သူများ အထူးစန်းပွင့်မည့်ကာလဖြစ်သလို ရုတ်တရက်အိမ်ထောင်ကျတတ်သော ကာလပါ လုပ်ငန်းနှင့်ပါတ်သက်၍ မိမိကြံရွယ်ထားသောအကြံအစည်များ အထမြောက်အောင်မြင်ပါလိမ့်မည်လက်ရှိလုပ်ငန်းတွင် လက်အောက်ငယ်သားအချင်းချင်း နားလည်မူလွဲမှားခြင်း ရန်များခြင်းများ ဖြစ်နေတတ်ပါသည် ကျန်းမာရေးမှာ ဒူးအဆစ်အမြစ်များနာ၍ မလှုပ်ချင်မကိုင်ချင် ဖြစ်နေလိမ့်မည် ထီ 96ပါသောထီထိုးပါ ယတြာ ကြံတစ်ညွှန့်နှင့် သပြေ၆ညွှန့်ပူး၍ဘုရားလှုပေးပါ […]
၉ တန်းကျောင်းသူလေးတွေရဲ့ မိဘများ ရင်နင့်စရာ ဖြစ်ရပ်-
၉ တန်းကျောင်းသူလေးတွေရဲ့ မိဘများ ရင်နင့်စရာ ဖြစ်ရပ် မိန်းကလေးတယောက်ဆို အကျီ ကြယ်သီးပါပြုတ်နေတယ် … သူတို.ကို ဘာဖြစ်တာလဲလို. လှမ်းမေးတော့ ကောင်လေး တစ်ယောက်က.ထမင်းစားချိန် ဆိုင်သွားဖို. ဖြတ်လမ်း ကြား ကနေ အဖြတ် ကိုးတန်း ကလေး မိန်းကလေး ငါးယောက် ကို တယောက် […]
ဝမ်းသာလိုက်တာ ပြည်သူ့အချစ်တော် ဆရာမကြီး ဒီနေ့ဆေးရုံကဆင်းပြီ အားလုံးဝမ်းသာနိုင်ဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ကြပါအုံးနော
ဝမ်းသာလိုက်တာ ပြည်သူ့အချစ်တော် ဆရာမကြီး ဒီနေ့ဆေးရုံကဆင်းပြီ အားလုံးဝမ်းသာနိုင်ဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ကြပါအုံးနော ယခု သတင်းကို ( Aye Aye Aung ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် မေ့ဆေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ် မြင့်မြင့်စိန် […]
မင်းတုန်းမင်းကြီး၏ နန်းတွင်းဓလေ့များ မင်းတုန်းမင်းသည်နေ့စဉ် အစည်းအဝေးကို နှစ်ကြိမ်ပြု လုပ်တော်မူလေရှိသည်။ ထိုအစည်းအဝေးသည် လွှတ်တော် အစည်းအဝေး မျိုးမဟုတ်ဘဲ ဘုရင်နှင့် သီးသန့် အစည်းအဝေးမျိူးဖြစ်လေ၏။ နန်းတော်အတွင်းရှိ လက်ဖက်ရည်ဆောင် နှင့် ဗောင်းတော်ဆောင် တွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ မနက်ညီလာခံ သည် အရေးကြီးပြီး ဝန်ရှင်တော်မင်း နှင့် […]
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ဆေး၂​ရှေ့တဲ့ မြောက်ဥက္ကလာစခန်းက လက်မြောက်ထားတဲ့ကတုံး အမေကတိုက်ပိုင်ရှင် သားကငမူး အမြဲသောက်ပြီးရူးနေတဲ့ကောင် သူတို့မြေညီထပ်မှာဌားတဲ့ Beauty Saloon လဲဆိုင်ဖွင့်တဲ့ချိန်ဆို ဆိုင်ထဲထိ အတွင်းခံပဲဝတ်ပြီး ရည်းစားစကားပြောလို့ပြော မိုက်ကြေးခွဲလို့ခွဲ ဆိုင်လာတဲ့ကာစတမ်မာဆိုလဲရိုက်လွှတ် ရဲစခန်းတိုင်လဲ တပတ်နဲ့ပြန်ပြန်ထွက်လာလို့ နောက်ဆုံးသူဒဏ်မခံနိုင်လို့ ၃ လနဲ့ဌားခအဆုံးခံပြီးပြေးခဲ့ရတယ်။ အပေါ်အခန်းဌားနေတဲ့ သင်္ဘောသားမိန်းမလဲ ယောကျာ်းသင်္ဘောတတ်တဲ့ချိန်ဆို ညဘက်အခန်းခိုးခိုးဝင်ဖို့လုပ်လို့ […]